About Us - Foshan Fumei Izihlalo Co., Ltd
izitulo kwedesika School
inkampani zethu zinesitafu ethile yobungcali, ezikumgangatho ophezulu ulawulo kunye nophuhliso. Baya ubunikele ukuphucula nokuqinisekisa umgangatho imveliso, nokuhlaziya isimbo imveliso kunye noyilo ukwenza inkampani yethu ukuya phambili. Baya kuqinisekisa ukuba zonke iimveliso zethu ziya kuthunyelwa ngumthengi kunye nomgangatho ophezulu ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
Thina yesebe ethile yasekhaya e Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, Zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan njl iimveliso zethu zokuthengisela eMelika, eOstreliya, eRashiya, kuMbindi Mpuma, Afrika, South East Asia kunye namanye amazwe.
Ukuhlala ugxininiso ngoku nokukhangela phambili kwikamva, zizele ukuzithemba thina wazimisa isicwangciso sophuhliso ixesha elide ithemba ngokunyanisekileyo ukuba basebenzisane kunye nabahlobo ehlabathini lonke, ukuze kuzaliseke umnqweno win-win ukuba wena kunye nam . Siza kuqinisekisa ukusebenzisana kunye nabathengi amatsha kunye nabadala ukudala isiseko ngenkulungwane ubudala elizayo nobuhlakani.